Raw Finasteride powder (98319-26-7) Vaiti - Phcoker
SKU: 98319-26-7 Category: Sex Hormone
Raw Finasteride powder (98319-26-7) video
Raw Finasteride powder is antiandrogen inotorwa nemuromo iyo inobata nekudzivisa rudzi rwechipiri 5-alpha reductase. Inoshandiswa sechirapa mune bvudzi rinosakara (murume muenzaniso), benign prostatic hyperplasia (BPH) mumadhora maduku, uye kenza yeprotate muzinga rakakwirira . Inoratidzwawo kuitira kushandiswa pamwe chete ne doxazos muchipatara kuderedza dambudziko rekuwedzera kwezviratidzo zveBPH. Uyezve, yakanyoreswa munyika dzakawanda ye androgenetic alopecia (murume-muenzaniso wemaruva).
Raw Finasteride powder (98319-26-7) Specifications
Product Name Raw Finasteride powder
Kemikari Name N-tert-Butyl-3-oxo-4-aza-5α-androst-1-ene-17β-carboxamide;17β-(N-tert-Butylcarbamoyl)-4-aza-5α-androst-1-en-3-one; N-(1,1-Dimethylethyl)-3-oxo-4-aza-5α-androst-1-ene-17β-carboxamide
muchiso Name Proscar, Propecia
Kirasi yeMishonga 5-alpha reductase inhibitors, synthetic steroid, Benign Prostatic Hypertrophy Agents
Molecular Wsere 372.54
Monoisotopic Mass 372.278 g / mol
Kunyorera Point 253 ° C
Freezing Point Kwete deta iripo
Biological Half-Life 6-8 maawa
ruvara Muchena / chena kuisa pfu yakasimba
Skukodzera DMSO: 32 mg / mL, yakasanganiswa yakachena muChoroform uye mune doro, zvishoma zvisinganyongorwi mumvura
Storage Temperature Chengeta pa RT
Raw Finasteride powder APane Batai kurasikirwa kwemvere (murume muenzaniso) chete nevarume vakuru. Raw Finasteride powder inogonawo kushandiswa kurapa bhenignal prostatic hyperplasia, prostate yakawedzerwa inopera, inovandudza urinary kufamba uye kuvandudzwa kwebenign prostatic hyperplasia inokonzera zviratidzo.
Raw Finasteride powder (98319-26-7) Tsanangudzo
Finasteride inodzivisa kutendeuka kwe testosterone kune dihydrotestosterone (DHT) mumuviri. Finasteride inoshandiswa kurapwa kwevarume vhudzi bvudzi rinorasikirwa pane vertex uye anterior mid-scalp nzvimbo. Kurasikirwa kwebvudzi rinoshandiswa nevarume chinhu chakajairika umo varume vanoona kuonda kwevhudzi pamusoro. Kakawanda, izvi zvinoguma mushure mutsvuku uye / kana kutarisa pamusoro pepamisoro. Propecia inoshandiswa nevarume chete uye haifaniri kushandiswa nevakadzi kana vana.
Finasteride powder (98319-26-7) Mechanism of Action
Finasteride inoshanda nekuderedza kuwanda kwehomoni dihydrotestosterone (DHT) mumuviri wako. DHT inowanzoita kuti prostate yako iwedzere kukura.
Kuderera kweDHT kunobatsira kudzivirira prostate yako kukura yakakura. Inotungamirirawo kuwedzera kwekubvudzira bvudzi nekuderedza bvudzi bvudzi rebvudzi riri pamusoro wako. Bvudzi rinokura kune dzimwe nhengo dzomuviri hazvibatsiri.
Kushandisa kweFinsteride powder (98319-26-7)
Finasteride powder inoshandiswa kurapa mhando dzevarume (androgenetic alopecia) pachikona uye pakati pepalp. Inofanira kushandiswa nevarume vakuru chete.
Yakakurudzirwa Finasteride powder (98319-26-7) Dosage
♦ Kubata vanhu vakuru veBenign Prostatic Hyperplasia
5 mg muromo kamwe kamwe pazuva
Mhinduro: Dosing ndiyo yakafanana mumatareti uye mune pamwe chete.
♦ Kubatsira vakuru vakuru veAndrogenetic Alopecia
1 mg muromo kamwe kamwe pazuva
Kurapa kwevarume vhudzi bvudzi rakarasika (androgenetic alopecia) mumarume chete. (Kuzvidzivirira nekubudirira zvakaratidzwa mune varume pakati pe18 kusvika kune makore gumi nemana 41 nekunonoka kusvika kuenzanisira kusuruvara kwemvere kwe vertex uye anterior mid-scalp area):
Mhinduro: Kushandiswa kwezuva nezuva kwemwedzi ye3 kana kupfuura kunokosha kusati kwawanikwa kubatsirwa. Kuenderera mberi kwekushandisa kunokurudzirwa kuti varambe vachibatsirwa. Kurega kwehutano kunotungamirira kushanduka kwezviri mukati memwedzi ye12.
Zvikanganiso zveFinasteride powder (98319-26-7)
Tsvaga rubatsiro rwezvehutano rwekukurumidzira kana iwe uine chimwe chezviratidzo izvi zvinokonzerwa nemagetsi: mikoko; kunetseka kufema; kurira kwechiso chako, miromo, rurimi, kana huro. Dana chiremba wako kamwechete kana iwe ukacherechedza chero mazamu emvere, marwadzo, chirwere chokubuda, kana mamwe mazamu anochinja. Izvi zvinogona kuva zviratidzo zvekenza yemvere yebonde.
Kusaderera zvakakomba Finasteride migumisiro inogona kusanganisira:
▪ kusava nehanya, kurasikirwa kwechido mune zvepabonde, kana kuti dambudziko rine unhu;
▪ kusagadzikana kwejjulation;
▪ kuzvikudza mumaoko ako kana patsoka;
▪ kuzvidzora kana unyoro mumazamu ako;
Erozi, kusava nesimba;
▪ kunzwa sokunge iwe unogona kupfuura;
▪ runny pua; kana
▪ kuputika kweganda.
Zvido zvepabonde zveFinsteride powder (yakaderera libido, kunetseka kuva nekugadzirisa, matambudziko ejaculation) inogona kupfuurira mushure mokunge mirega kutora mishonga iyi. Taura nachiremba wako kana une dambudziko pamusoro pemigumisiro iyi.
Raw Flibanserin HCL powder (147359-76-0)
Raw Flibanserin hydrochloride powder, inotengeswa pasi pezita rekutengeserana Addyi, imishonga inogamuchirwa kurapa ...
Raw Tadalafil poda pasi pezita reCialis inoshandiswa kurapa kusagadzikana (kusasimba) uye zviratidzo zve benign Prostatic ………
Unyanzvi: 1190kg / mwedzi